Ireo Atleta Vehivavy Saodiana – Natao Resa-be Tao Amin’ny Twitter, Taorian’ny Lalao Olympika · Global Voices teny Malagasy
Ireo Atleta Vehivavy Saodiana – Natao Resa-be Tao Amin'ny Twitter, Taorian'ny Lalao Olympika	Voadika ny 21 Aogositra 2012 4:57 GMT
Zarao: Ity lahatsoratra ity dia ampahany amin'ny fanadihadiana nataonay manokana momba ny Lalao Olaimpika Ao Londona 2012. Torian'ny nandaozany ny lalao Olaimpika, ireo atleta vehivavy Saodiana sady voalohany teo amin'ny tantaran'ny fanatanjahan-tena Saodiana, i Sarah Attar sy Wojdan Shahrkhani dia nahazo vava ratsy tao amin'ny tontolon'ny Twitter Saodiana .
Rehefa tonga farany tamin'ny 800 metatra vehivavy, dia nahazo tehaka nirefodrefotra tamin'ireo mpijery i Sarah – ary lasa lohahevitra malaza tao amin'ny Twitter ny anarany.
Ity ambany ity misy santionany tamin'ny bitsika mitondra fanohanana avy amin'ireo Saodiana mpampiasa Twitter ho an'ireo atleta roa ireo:
Tsy fandresena iny fa ny fandraisana anjara fotsiny #SaraAttar vehivavy Saodiana voalohany mba nifaninana hatrizay! #olympicmoments – fanehoan-kevitra tao amin'ny Twitter avy amin'i @DIAstyle, izay nizara ity sary ity tao amin'ny Twitter
Manoratra i Ali Khadra:‏
@aykcanvas: tsy voatery ho volamena foana ange e! Mbola lehibe lavitra noho izany ny vitanao. Misaotra anareo #SaraAttar #Wejdan #Wijdan. Misaotra anao #KSA. Aleo tara toy izay tsy misy #2012Olympics
Feno hafaliana i Bader Aljehani:
@BooDzJ: #SaraAttar #SaraAttar, tena reharehanay ianao sy Wijdan mihoatra noho izay ao anatin'ny Ekipa Saodiana!
Lohahevitra noresahana be ny Sara Attar #SaraAttar, hoy ny @WordWizard manoratra ao amin'ny Twitter. Mizara ity sary ity ihany koa izy
Ary manome toky i Nada Abu fa:
@NadaAbu: Ho hitanao eo amin'ny sary aho indray andro any. Misaotra amin'ilay aingam-panahy#SaraAttar http://twitpic.com/agw7nn
Nanala baraka anay ianao!
Etsy ankilany, ny sasany amin'ireo Saodiana mpampiasa Twitter dia tsy mankasitraka ny fandraisan'anjaran'ireo atleta roa ireo, manome tsiny ny fianakavian'izy ireo sy ny fanjakana noho ny famelàna azy ireo “hampidina ambany” ny anaran'ny Fanjakana sy ny lazany.
Anisan'izy ireo ny mpampiasa Twitter, Faisal Abuthnain, izy manoratra [ar] ity :
Sarah Attar, ianao ve mihevitra fa ireo mpanohana anao ireo dia manohana anao noho ny zava-dehibe vitanao? Tsia, izany no misy dia satria nandika ny fitsipiky ny fiaraha-monina misy anao ianao, ny fampianaran'ny fivavahanao, ny toro-hevitr'ireo olon-kendry ao amin'ny fiaraha-monina misy anao sy ny lalàn'ny Hijab misy anao!
Tohina i ZaibB rehefa novakiany teo amin'ny tenifototra natolotra ho an'ireo atleta roa ireo ka sosotra izy:
Ry Wijdan mahantra! Zavatra telo no novakiako tao amin'ny tenifototra momba azy: 1-fanavakavaham-bolo-koditra araka ny faritra 2- fanavakavaham-bolo-koditra eo amin'ny foko 3- ary fanavahana ny mahalahy sy ny mahavavy
Mitsikera ny Dr. Mahammad Albarrak:
Ny tena ratsy indrindra noho ny fanaovana ota iray dia fanindrahindràna azy io, toy ireo izay miezaka ny hiaro an'i Sarah sy Wojdan ary mitady ala-olana tamin'ny fihetsika nataony
Farany, miezaka manamarin-tena i Nourah:
@noura_aljadaan: Ho an'ireo izay mihomehy an'i #SaraAttar aza adinoina fa ny sekoly aty tsy mampianatra fanatanjahan-tena ho an'ny ankizivavy, noho izany ny fandehanana any dia fahombiazana
Ity lahatsoratra ity dia ampahany amin'ny fanadihadiana nataonay manokana momba ny Lalao Olaimpika Ao Londona 2012. Zarao: twitter facebook reddit googleplusEmail endriny atao pirinty MpanoratraHaifa Alrasheed
16 ora izayLibanonaLAHATSARY: Herisetran'ny Polisy Libaney Tamin'ireo Mpanao Fihetsiketsehana “Maimbo Ianareo (You Stink)”
Vakio amin'ny teny Svenska, Ελληνικά, Español, Nederlands, Italiano, Français, ျမန္မာ, English
FanatanjahantenaMediam-bahoakaVehivavy sy MiralentaLalao Olaimpika